Taxanaha LTB ee ugu Wanaagsan ee Balladhka Laba-soo-geliyaha Suun-ka-samaysiyaha Farshaxanka ee Centrifugal iyo Warshadda | Lang Tai
Cadaadiska taagan: 0.98 ~ 55.17 inches wg (250 ～ 1,600 pa)
Nidaamka AHU (Unit Handling Unit) waa nidaam daaweyn hawo madaxbannaan oo ka kooban nidaamka sahayda hawada iyo nidaamka qiiqa, kaas oo ka kooban Qaybaha Hawada ee Make-Up (MAU), Unugyada Baakadaha leh (PU), Unugyada saqafka (RTU), iyo Unugyada Soo -kabashada Tamarta (ERU).
Nidaamka AHU wuxuu ku salaysan yahay inuu hawo nadiif ah u diro qolka iyada oo qalab gaar ah dhinac ka ah qolka xiran, ka dibna dibadda u soo saara isagoo wata qalab gaar ah oo dhinaca kale ah. “Goobta socodka hawada cusub” waxaa lagu samayn doonaa gudaha, si loo daboolo baahiyaha is -weydaarsiga hawo nadiif ah oo gudaha ah. Qorshaha hirgelinta waa: iyadoo la adeegsanayo cadaadis dabayl sare, taageere qulqul weyn, oo ku tiirsan xoog farsamo, laga bilaabo hal dhinac oo sahayda hawada gudaha ah, laga soo bilaabo dhinaca kale oo leh taageere qiiqa si khaas ah loo qorsheeyey oo dibedda ah si loogu qasbo samaynta duurka socodka hawada cusub nidaamka. Shaandhee, jeermis -dilis, jeermis -dile, oksijiin geli oo sii kululee hawada sii gelaysa qolka inta aad siinayso hawo nadiif ah jiilaalka.
Sida LTB300L-4 waa taageere hawo-qaboojiye centrifugal, daab hore qaloocsan, dhexroor daab 300mm leh ballac weyn, baallayaasha mootada 4.
1. Ku rakibidda taxanaha LTB taageere centrifugal wuxuu leeyahay saddex nooc oo waaweyn marka loo eego xagal -ka -soo -baxa (inta u dhexeysa bannaanka marawaxadda iyo dusha kore): 0 °, 90 °, 180 °. Waxa kale oo loo habeyn karaa jihooyinka kale iyadoo loo eegayo baahida dadka isticmaala.
2. Jihada wareegga ee marawaxadda centrifugal waxay u qaybsan tahay CW iyo CCW iyadoo loo eegayo jihada wareegga ee impeller. Ku socota Taageerayaasha Centrifugal Belt-ka: oo ku wajahan xarig-mareenka marawaxadda, dhinaca bidix ee wareegga wareejiyaha waxaa lagu magacaabaa CW, iyo jihada-ka-xigta ee wareegga gaduudka waxaa loo yaqaan CCW.
Hore: Fan Warshadaha Jumlada Warshadda Jumlada - taageere centrifugal LTZ - Lang Tai
Xiga: Taxanaha LTBH Dib-u-leexday Ballad Laba-gashan Suunka Centrifugal Fan ku kaxeeyo
Taageeraha Saqafka ee Centrifugal
Fan -mareenka Centrifugal
Taageerayaasha Xarunta Warshadaha
Fanaanka Xag -jirka ee Radial